Iyo yakanakisa software ye 3D kudhinda | Linux Vakapindwa muropa
Mune mamwe mabloggi akasarudzika kana mamwe niches pakave nekutaura kwenguva refu nezve 3d kudhinda, kunyangwe muLxA takapa zvimwe zvinyorwa kuLinux madhiraivha emhando iyi yematatu-emhando maprinta, software yekugadzira uye kudhinda kwemaitiro aya, mapurojekiti ekodhi ane hukama akavhurika , nezvimwe. Zvakanaka, nhasi ndichaedza kuita runyorwa rwezvakanakisa kunyorera kana 3D kudhinda software iyo yatinogona kuwana yeGNU / Linux system.
Ini ndichaedza kunyora pamwe nekunakidza kwepanorama iyi uye kuti zvinoenderana nepuratifomu yedu. Ehezve, iwe unogona kuita ako mazano kana ndikasiya chero kumashure kana ndine chero mhando rezano, kushoropodza kana chimwe chinhu chekupa. Nezve izvo iwe unofanirwa kusiya komendi yako, ichave inogamuchirwa kwazvo. Uye nezvakataurwa, handei nerondedzero:
Cura: isoftware yevatangi vanoda kutanga munyika ino ye 3D kudhinda kwakagadzirwa naSlicer Software kugadzirira STL mafaera erudzi urwu rwevaprinta nemadhizaini edu. Iyo yemahara uye inowanikwa yeLinux.
123D Kubata: Iyo zvakare yemahara uye ine hunhu hwakafanana neiyo yapfuura, kunyangwe isingawanikwe yeLinux, ndeyeavo vane Google Android system.
3D Slash: software isina zvishoma yekuchiva kune yakapfuura, ndeye mahara uye inowanikwa kugadzira edu e3D modhi zvese kubva kuLinux uye yakavakirwa padandemutande rewebhu kuti ubate kubva kune chero yewebhu browser.
TinkerCAD: ndeye 3D yekudhinda software yekugadzira edu magadzirirwo ayo anowanikwa emahara uye akagadzirwa neanozivikanwa Autodesk kambani, yakafanana neAutoCAD. Uye kunyangwe isina yega vhezheni yeLinux, iri webhu-based saka inogona kushandiswa kubva kune chero browser.
3DTin: yakafanana neiyo yapfuura, yakavakirwa pawebhu nekuda kweWebhu yeGL, kunyangwe paine zvimwe zviyero zvichienzaniswa nevakwikwidzi vayo. Izvo zvakare zvemahara ...
ViewSTL: yakafanana nehunhu kune yakapfuura, kunyangwe iri nyore uye yakapusa, nekuti inoshanda chete kuratidza mafaera eSLL.
Netfabb Yakakosha: Kune vashandisi vepakati, ivo vanoda SLicer Software kugadzirira iyo STL mafaera ekudhinda 3D. Nayo unogona kugadzirisa, kugadzirisa uye kuongorora dhizaini. Yemahara uye yeLinux
Dzokorora: yakafanana neiyo yapfuura, zvakare inoenderana neSlicer, yemahara uye yeLinux.
FreeCAD: ndeyekuziva kwekare kweLinux, yemahara uye yemahara, iri software yekugadzira maCAD dhizaini nemukana wekuita iwo mu3D nekuaprinta pane aya marudzi emaprinta.
SketchUp- iri nyore uye inoshanda yepasi pemvura mushandisi chirongwa cheedu 3d printer mapurani. Iyo ine vhezheni yeLinux uye yemahara, kunyangwe iine yakabhadharwa Pro vhezheni ingori pamusoro peanopfuura ma650.
Gonesa3D: chirongwa chevashandisi vehunyanzvi chinoda Slicer kugadzirira STLs uye mutengo wayo uri iwo anenge € 150 yelayisensi.
slic3r: Yemahara uye yeLinux, asi inopa hunyanzvi nharaunda yezvigadzirwa zvedu, kunyangwe ichitsamira paSlicer Software.
Blender: Iyo inorema inorema yatakatotaura nezvayo, inyanzvi uye software yepamberi yekugadzira yakaoma 3D dhizaini. Yemahara uye yeLinux.
MeshLab: zvakare inowanikwa yeLinux pakati pemamwe mapuratifomu. Iyo yemahara vhezheni inopa yehunyanzvi software yekugadzirisa iyo STLs.
Octo Print- Yevashandisi vehunyanzvi, yemahara uye inowanikwa yeLinux. Unogona kuwana maprinta kutanga, kumbomira kana kukanganisa kuprinta ...
Icho chingori chinyorwa chinoratidza Kune avo vari kutanga munyika ino, haisi chinzvimbo kana kuenzanisa, kure nazvo. Asi aya ndiwo mabudiro anoita mazita kuti iwe ugone kuongorora zvishoma nezve izvi maapp uye uzive kuti kune dzakawanda dzimwe nzira dzeLinux kana iwe uchida kuve neiyo 3D purinda mune iyi mhando yenzvimbo. Ehezve iwe unozowanawo madhiraivha kuitira kuti iwe usave nezvinetso zvekuenderana nevazhinji maprinta pamusika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Iyo yakanakisa software ye 3D kudhinda
Pindura kune akawanda
Iwe unogona kuita dzidziso kubva ku0 (kubva pane zvekutenga kusvika kuprinta) ndingafare nekuti ini handizive kwekudzidza
Alfredo Antonio Martinez akadaro
Mhoro shamwari, kuti ndisazogadzira nyonganiso rega ndimbopa zviyo zvangu zvejecha, chimwe chinhu mapurogiramu ekugadzirisa zvinhu mu3D, uye imwe, inozivikanwa Slicers ayo ari mapurogiramu anoshandura chero faira kubva kuStl (stereo lithography) fomati kune iyo. gcode inova iyo faira ine zvese zvinongedzo zvekufamba kweprinta, kudzivirira kugadzira nyonganiso, ndinofunga kuti angangoita kana ese mapurogiramu ekugadzira anofanirwa kutumira mafaira kune stereo lithography, asi pakupedzisira isu tese tinofa mukushandisa mapurogiramu matatu anozivikanwa kwazvo ekuchekesa ayo ari Cura, Slic3r, kana Kurerutsa, kwaziso!
Pindura kuna Alfredo Antonio Martinez
Diego Bern akadaro
Ini pachangu ndinoshandisa Blender uye ndiyo yakanakisa yandakamboshandisa, kunyangwe iyo interface dzimwe nguva ichiita kunge isina hushamwari, ibhomba!
Pindura Diego Berna